Ogaden News Agency (ONA) – The Star – Ree Garisa ayaa soo Qabtay Gacan-ku-dhiigle Hajir
The Star – Ree Garisa ayaa soo Qabtay Gacan-ku-dhiigle Hajir
Wargayska (The Star) ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in Booliska Garisa ay qabteen dambiile aad loo raadinayay oo aad khatar u ahaa. Wuxuu intaa ku daray wargayskan in Cabdiraxmaan Hajir oo ah nin Itobiya ka yimid ay soo qabteen dadweynaha Garisa galabnimadii Arbacada.
Ninkan lasoo qabtay ayaa intaan lasoo qabanin waxay ku soo dileen isaga iyo laba kale oo la socotay jidka Guled ganacsade Maxamad Xassan Cabdi.
Dadka ayaa 30 daqiiqo daba ordayay saddexdan gacan ku-dhiigle ilaa ay gacanta ku dhigeen gacan-ku-dhiigle Hajir. Komishineerka degmada Gaarisa Rashid Khator ayaa intaa raaciyay in dambiilaha laga helay markii la qabtay bistoolad nooca ceska iyo 3ex xabadood. Waxaa kaloo ay booliska qarxiyeen miino uu watay oo aan qarxin markuu dadka ku tuuray.
Waxay qortay jariidada The Star in saddexdan nin ee ka soo galeen xadka Mooyaale ee Kenya sanadkan bilowgiisii kadibna ay usoo gudbeen Garisa.
Booliska ayaa sheegay in saddexdan gacan-ku-dhiigle ay ka dambeeyeen dilalkii iyo qaraxyadii gilgilay magaalada Garisa bilihii lasoo dhaafay.
Rashid Khator ayaa yidhi; “ Qabashada midka ka mid ah gacan-ku-dhiiglayaasha waxay muhiim u tahay xogta aan ka heli doono. Waxaan doonaynaa inaan ogaano dadkii la socday iyo kuwii soo diray.”
Wuxuu kaloo sheegay mudane Khator; “ waan ku daba-joognay nimankan, waxaanan u mahad-naqaynaa dadweynaha nagu taageeray qabashadooda.” Isagoo intaa raaciyay in eedeysanayaasha lagu soo oogi doono dilalkii ugu dambeeyay, inkastoo ay weli baadhitaanadii socdaan.
“Ma ogolaanayno in dadkanaga la dilo. Khilaafaadka siyaasiga ah iyo ganacsiga ma’aha inay magaaladanada ku xaliyaan. Waan dabasoconaynaa dhamaantood intaan kasoo qabanayno”. Ayuu yidhi komishineer Rashid Khatoor.